Ele-PSL lithi lisamfuna umqeqeshi elinqamule inkontileka yakhe | News24
Ele-PSL lithi lisamfuna umqeqeshi elinqamule inkontileka yakhe
Cape Town - IPlatinum Stars isikuqinisekisile ukuthi ifuna uCavin Johnson aqeqeshe leli qembu emidlalweni emibili elandelayo yeCAF Confederations Cup, phezu kokuthi ngaphambilini ithe inkontileka yakhe angeke ize ivuselelwe.
UJohnson watshelwa ngaphambilini kuleli sonto ukuthi awusadingeki umsebenzi wakhe kwiDikwena kule sizini, futhi angeke aze avuselelelwe inkontileka yakhe.
OLUNYE UDABA:UBenni McCarthy uzothulwa njengomqeqeshi weqembu lePSL
Kusabalale imibiko yokuthi lo mqeqeshi oneminyaka engu-57 ubudala ukhonjwe indlela afika ngayo, kodwa-ke, iStars isidalule ukuthi akunjalo futhi ngokusempeleni unesivumelweno kuze kube ukuphela kukaJuni.
Le kilabhu izotholana phezulu neCS Sfaxien yaseTunisia enkundleni yezemidlalo iRoyal Bafokeng Sports Palace ngoLwesithathu, ngomhlaka-21 kuJuni, ngemuva kwalokho bese idlala ngaphandle eMouloudia Alger, e-Algeria, ngomhlaka-30 kuJuni.
Utshele iSowetan wathi “Kumele sikubeke kucace ukuthi uCavin akaxoshwanga, inkontileka yakhe engazange ivuselelwe.”